ANIOTO CLUB: Waa maxay Naadiga Anioto? Anioto wuxuu doonayaa inuu noqdo Naadi isu keenaysa dhamaan dadka Madowga / Afrikaanka ah ee quseysa taariikhdooda, waqtigooda iyo mustaqbalkooda.
- Anioto si sax ah ayey u rajeyneysaa inay sare u qaaddo dhaxalka sayniska iyo dhaqanka ee Madow / Afrikaanka;
- Anioto waxaa loo hayaa inay soo jiitaan hiddaha dhaqan ee dadka Madowga / Afrikaanka ah;
- Anioto wuxuu xuddun u yahay guulaha ay dadka Madow / Afrikaanka ahi qoraaga u yihiin;
- Anioto wuxuu ku siinayaa fursada inaad ku ogaatid wax soo saarka ay sameeyeen dadka madowga / Afrikaanka taariikhda oo dhan;
- Anioto wuxuu ku saleysan yahay qiyamka dhaqameed ee dadka Madow / dadka Afrikaanka ah, go’itaanka dhameystiran ee dadka Madowga / Afrikaanka wuxuuna kugu qaataa daqiiqad qaabeyn ah marka loo eego caalamka madow / Afrikaanka.
FIIRO GAAR AH: hadaad hayso fikrad, ra'yi, talo soo jeedin, tabarruc, marag, fiidiyow, hal abuur, maqaal, talo; ECT. Haka labalabeyn inaad nagala soo xiriirto aniotoladykongo@gmail.com ama aad uhesho @kongolisolo.co.
Walaalaha Madoow / Afrikaanka Walaalaha ah, ma jiro waqti aad ku lunto, ku biir Naadiga Anioto, weligaa ceeboobi mayso!